Fiatrehana ny tondra-drano Nodiovina ny tatatra eny Andohatapenaka III
Tandroy maty voatifitra tany Anjozorobe “Tsy hamelanay i Mathieu Rajaonarimampianina”
Mifoha indray ny raharaha vono olona tany Anjozorobe nahavoatonontonona an’i Mathieu Rajaonarimampianina, zanaky ny filoha teo aloha. Ny volana febroary 2016 no nisian’ilay gidragidra,
Praiminisitra Ntsay Christian Misy mitady hamono ?
Niteraka resa-be sy nitarika fanehoan-kevitra maro ny mahakasika ilay loza niseho teny anoloan’ny La City Ivandry ny takarivan’ny zoma 14 septambra lasa teo. Zaza roa tamin’izay no voadonan’ny fiara mpisava lalan’ny primatiora, ka naratra mafy ary nahatezitra ny mponina.
Fandorana fiara teny Ivandry Nisy olona efa voasambotra
Namoaka fanambarana iombonana mitondra ny datin’ny sabotsy 15 septambra momba ilay lozam-pifamoivoizana teny Ivandry ny talen’ny fiarovana ny praiminisitra sy ny tale jeneralin’ny polisim-pirenena.
CNaPS teny amin’ny FIA Nahatratra 70 ny olona voakarakara nandritra ny andro fahatelo
Nifarana omaly alahady ny FIA (Foire Internationale de l’Agriculture) eny Tanjombato. Anisan’ireo nandray anjara teny an-toerana ny CNaPS .
Fitandroana ny filaminana Miofana ny polisy monisipaly eto Antananarivo
Miatrika fiofanana ao anatin’ny andro maromaro ireo polisy monisipaly an’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA). Tafiditra indrindra amin’ny vinan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana izy ity dia ny hanatsarana hatrany ny asan’izy ireo eo amin’ny fitandroana ny filaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana.
Mitaraina ny tantsaha any Alaotra Tratry ny tsindrihazolenan’ny Fanalamanga…
Nijoro nanomboka ny volana aogositra 2017 ny Fikambanan’ny tantsaha faritra Alaotra.
Minisitry ny fitsarana “Tsy mbola afaka i Claudine Razaimamonjy”
Manoloana ny didy navoakan’ilay rafitra miady amin’ny kolikoly eto amintsika na ny PAC (Pole anti-corruption),
Iray amin’ny faritra iva sy mora tondraka rehefa fotoam-pahavaratra ny eny amin’ny fokontany Andohatapenaka III, ka nanao fidinana teny an-toerana ny ekipa teknikan’ny boriborintany voalohany, ny RF2 (Rafitra Fidiovana sy Fanadiovana) ary ireo « Association »,
izay mpitantana fotodrafitrasa eo anivon’ny boriborintany omaly alatsinainy 18 desambra 2017. Raha araka ny hita teny an-toerana dia zary lasa toerana anarian’ny olona fako sy maloto ny lakandrano ka somary manahirana ny fanadiovana ny azy. Raha ny tokony ho izy, hoy ny tompon’andraikitra dia anjaran’ny fokontany sy ireo mponina ny manadio ny lakandrano madinika kanefa noho ny habetsahan’ny loto diso tafahoatra dia tsy maintsy midina manao fanadiovana faobe ny kaominina Antananarivo Renivohitra mba ho fisorohana ny fiakaran’ny rano rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Ny alarobia 20 desambra 2017 dia hitohy eny amin’ny Cité Ambodinisotry indray ny fanadiovana ireo lakandrano madinika eo anivon’ny boriborintany voalohany. Mila fahatongavan-tsaina io resaka fahadiovana io, ary fomba fiteny mahazatra hatramin’izay ny hoe rehefa tsy mandoto, dia naman’ny manadio. Sarotra ho antsika Malagasy anefa ny manatanteraka izany.